Columbia inomhan'arira Amazon ichipomera mhosva yehunhu hwevanhu | Linux Vakapindwa muropa
Columbia inomhan'arira Amazon ichipomera mhosva yekuzvitonga
Kubva gore rapfuura tinouya inovhara muLinux Inokanganisa kuongororwa kunoitwa nehurumende dzeEuropean neAmerica vachipesana nemaitiro emakambani makuru eetekinoroji. Ini ndakatoedza kufunga kuti kwavo kwakanangana kwakasimba vachida kugadzwa kwaJoe Biden uye kurambidzwa kwaDonald Trump kwaizoenda kunoshanda kupokana navo. Vanyori vezvematongerwo enyika vakawana simba rakakura rine makambani ezve tekinoroji uye zvave kutozivikanwa kuti vezvematongerwo enyika vanonyatso tenda kuti simba nderavanhu uye rinofanirwa kutarisirwa nemaoko anokwanisa evamiriri vavo (ivo).
Senge kubvumirana neni Mhosva yemabatiro ehumwe nyika haina kuiswa mune imwe kunze kweguta guru reUnited States. Washington, Dunhu reColumbia.
Mupomeri haasi mumwe kunze kweDunhu reColumbia pachayo, kanzuru yemasipareti yakapihwa simba rekumhan'ara uye kumhan'arwa munzvimbo yayo sehurumende yemunharaunda yenharaunda inoita chigaro chechigarire chehurumende yeUnited States. Mumiriri wayo wepamutemo wedare (uyo anonyorera mhosva) ndiye Gweta Guru.
1 Columbia inomhan'arira Amazon. Kupomerwa
1.1 Maitiro anopesana nemakwikwi
2 Chikumbiro kudare
Columbia inomhan'arira Amazon. Kupomerwa
Runyoro inotsanangura Amazon se iyo inotungamira yepasirese online yekutengesa chikuva. Vapomeri vanofungidzira kuti kambani inotonga pakati pe50 ne70% yemusika wekutengesa online kutengesa nepo vamwe vakwikwidzi vakaita saEbay kana WalMart vasingapfuure 5%. Kushanya kwegore rega kunzvimbo iyi 2.6 bhiriyoni uye 74% yevatengi vanoenda ipapo chaipo pavanofunga kutenga chigadzirwa. Zvichakadaro, 66% vanoona Amazon senzvimbo yekutanga kutanga kutarisa.
Maitiro anopesana nemakwikwi
Kusvika pano, panenge pasina chekushora. Tinogona kusimbisa kuti sevhisi kana zvigadzirwa zviri nani pane zvevanoikwikwidza, asi muchuchisi haabvumirani.
Mukupfuura vanonongedzera kuna Jeff Bezos 'sarudzo ku wedzera kutora chikamu kwemisika dzakasiyana kudzamara vazvitonga, vachibayira purofiti-pfupi. Vanobva vatanga kunyora zvavanofunga kuti zvinopesana nemakwikwi maitiro.
Kutanga, Amazon inoshanda seyekutengesa online yezvayo yega zvigadzirwa zvigadzirwa. kana zvigadzirwa zvakawanda kubva kune vamwe vanotengesa kana vagadziri. Panzvimbo yechipiri, Amazon inopa mukana kune yayo online yekutengesa chikuva pamubhadharo kune wechitatu mapato kuitira kuti vagone kutengesa zvigadzirwa zvavo kune vatengi. Kune anopfuura mamirioni maviri evatengesi ava, ayo anomiririra angangoita 60% yemutengo wezvigadzirwa zvinotengeswa papuratifomu.
Amazon inopa zvirongwa zviviri kune vatengesi- Mutero wekutengesa we $ 0.99 kana yakabhadharwa pamwedzi mubhadharo we $ 39.99. Pamusoro pezvo, chikuva chinopa kutarisira manejimendi ekutakura kwechigadzirwa uye kuunganidzwa mukutsinhana mari yekuwedzera.
Muchuchisi anotsigira kuti eIyo algorithm inosarudza yakanakisa kupihwa (iyo inonyanya kuratidzwa pane ino saiti uye ndiyo ine yekutengesa zvakanyanya) inoshandiswa kubatsira avo vatengesi vanogadzira purofiti yepamusoro ye Amazon ichiregeredza zvinopa zvirinyore kumutengi.
Chimwe chinhu chinoshorwa mudare iri chisungo chinomanikidza vatengesi kuti vape mitengo yakaenzana kana yakaderera iyo yewebsite yemutengesi kana iyo yemamwe mapuratifomu. Nekudaro, hazvigoneke kuti vatengesi vakazvimiririra vapfuure pane mari dzakachengetwa nemitengo yakaderera pane mamwe mapuratifomu kune vatengi.
Sezvo kana izvo zvisina kukwana, zvinoita sekudaro futi vakomana veBezos vanobuda pamaoko nemari yavanobhadharisa vanotengesa vakazvimirira.
Izvo zvinofungidzirwa kuti nekusanganisira iyo yekusarudzika yekutumira yekutakura sevhisi, vatengesi (uye pakupedzisira vatengi) vanopedzisira vabhadhara kusvika ku45% pane 15% hwaro. Hapana kana eayo maviri anonyanya kukwikwidza akanyanya kudiki, kunyangwe achiwedzera ekuendesa manejimendi masevhisi.
Zvinokumbirwa nemuchuchisi kubva kudare zvinotevera:
Ban Amazon kubva mukuenderera mberi nekurwisa-kukwikwidza maitiro.
Tora, kana zvichidikanwa, matanho anodiwa kuti uwane poindi yapfuura.
Sarudza mutariri kuti ave nechokwadi chekuteerera matanho anodiwa.
Gadzira muripo wakakwana kuDunhu reColumbia semunomhan'ara.
Unganidza vatongi kuti uone mhosva yemunhu ari kupomerwa mhosva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Columbia inomhan'arira Amazon ichipomera mhosva yekuzvitonga
Amazon is a slop, handina kumbobvunza zvakawanda kuti nditaure uye parizvino, kana ndichigona, ndinoenda kuchitoro, ndiro dambudziko, zvitoro zviri kutsakatika, kune mashoma uye mashoma zvitoro, chete zvipfeko, chikafu uye Chinese. Amazon iri kuchaja zvese, ndosaka ndati kana ndichikwanisa, nekuti zvinoitika kuti pane zvinhu uye kwete chimwe kana zviviri, kana zvisiri zvakawanda, zvaunofanira kuzvitenga nechisimba, nekuti hakuna zvitoro, kupi kumberi kana Paive navo, kuti vakwanise kuenda kunotenga, ndinovimba vakaisa pasuru yakanaka mavari, kunyange hazvo iyo yeAmazon iri na, chihwitsi chakakandirwa pasi, zvisinei kuti mamirioni faindi yaive sei, dai zvanga zvakadaro.